Android Mobile Phone များတွင် Internet ချိတ်နည်းများ ~ ဇင်ကို(နည်းပညာ)
12:00:00 am ဖုန်း No comments
1.GSM Internet Setting ထည့်နည်း(for Android)
Android V4.0.3 အထက်သုံးသူများ အတွက်
Setting > More >Mobile Networks > Access Point Names ကို ၀င်ပါ။
အခြား Version များအတွက်
Setting >Wireless and Network >Mobile networks >Access Point Names ကို ၀င်ပါ။
Access Point Names ကို ရောက် လျှင် (MEMU) ကို နှိပ်ပါ။
ပြီးရင် New APN ကို နှိပ်ပါ။
Name ===> MPT
APN ===> mptnet
Username ===> mpt
password ===> မဖြည့်ပါ။
MCC ===> 414
MNC ===> 01
Authentication type ===> CHAP ကိုရွှေးပါ။
APN type ===> Internet ကိုရွေးပါ။
Menu ကို နှိပ်ပြီး Save ကို နှိပ်ပါ။
2.CDMA 800MHz ဖုန်းတွေကို Internet Setting ချိတ်နည်း
Menu Key နှိပ်ပြီး Setting ထဲ ၀င်ပါ။ Wireless Network ထဲဝင်ပါ။
ICS မှာ More ထဲဝင်ပါ။ Mobile Network ထဲဝင်လိုက်ပါ။ Access Point Names ထဲဝင်လိုက်ပါ။
CTNET နဲ့ CTWAP ကိုတွေပါလိမ့်မယ်။ CTNET ထဲဝင်လိုက်ပါ။
Name - CTNET
Proxy - မထည့်ရပါ
Port - မထည့်ရပါ
Username - ကြိုက်တာရိုက်ပါ။
Password - ကြိုက်တာပေးပါ။
Server - မထည့်ရပါ
Data Bearer - Package Data
3. ၁၅၀၀ တန် CDMA ဖုန်း ( Android handset အမျိုးအစား) များအတွက် အင်တာနက် Setting ထည့်နည်း
၃ – Mobile networks ထဲကိုဝင်ပါ
၄ – Access Point Names ကိုဝင်ပါ
၅ – Menu Key ကိုနှိပ်ပြီး New APN ကိုနှိ်ပ်ပါ
၆ – အောက်ပါအတိုင်းလိုက်ဖြည့်ပါ
Name – မိမိနှစ်သက်ရာ (ဥပမာ – lamin )
username – lamin@c800.mm
MMS Port -ဘာမှမထည့်ပါ
APN type – * ( * ဒါလေးပဲရေးလိုက်ပါ )
ဒါတွေအားလုံးပြီးသွားရင် menu key ကိုနှိပ်ပြီး Save (or) Done ကိုနှိပ်ပါ
ဒါက Comment မှာ KILLER MHDR ဆိုတဲ့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက် ရေးသွားတာ..
1. APN NAME (MPTNET ,MECTEL) -ဒိအပြင် မိမိကြိုက်နှစ်သက်သည့်NAMEပေးနိုင်သည်။
2.USER NAME (cdma@c800.mm, card@c800.mm) ၄င်းနှစ်ခုအနက်တစ်ခုကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
3.PASSWORD (card,cdma) တို့ကိုတစ်ခု(သို့)တစ်ခုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၄င်းsetting သည်cdma usb modem နှင့်usb router နှင့်အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။
ဖုန်းကနေ အင်တာနက်စတင်သုံးစွဲမယ်ဆိုရင် အောက်ပါအတိုင်းလုပ်ရုံပါပဲ။
၁ – setting ကိုဝင်
၂ – Wireless & Networks ထဲကိုဝင်
၃ – Mobile Network ထဲကိုဝင်
၄ – Data Enable ကို အမှန်ခြစ်ပေးလိုက်ပါ
ဒါဆိုရင် သင့်ဖုန်းရဲ့ Notification Bar ( အပေါ်ဘက် လိုင်းအားပြသောနေရာ နံဘေး) တွင်
အပေါ်တက်အောက်ဆင်း မြှားလေးတစ်ခုပေါ်လာပါ့မယ် အင်တာနက်စသုံးလို့ရပါပြီ။
အထက်မှာ ဖေါ်ပြခဲ့တာတွေဟာ ကျွန်တော့်ဆီမှာတင်ထားတာတွေကိုရော. အင်တာနက်မှာ ရှာဖွေလို့ရတာတွေကိုရော စုပေါင်းပြီးတင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်.. အားလုံးကို ကျွန်တော် စမ်းသပ်ပြီး အဆင်ပြေပါတယ်... ရေးသားခဲ့သူတွေက များတော့ အားလုံးသော ရေးသားသူများကို Credit ပေးပါတယ်..
မူရင်း မောင်ပေါက် < Knowledge Note >